Nhau - Mucheche kukwidza mari inokwana makumi matatu muzana yemari yemhuri.Ndeipi mikana yemusika wematiriyoni mana waamai nevana?
Parizvino, kuda kwese kwevanhu vekuChina kuita vana kuri kudzikira.Mashoko eQipu anoratidza kuti kana zvichienzaniswa nemakore gumi apfuura, nhamba yekuberekwa kwemwana mumwe chete yakaderera ne35,2%.Nekudaro, saizi yemusika waamai nevacheche inoramba ichikura, kubva pa1.24 trillion yuan muna 2012 kusvika 4 trillion yuan muna 2020.
Nei pane musiyano wakadaro?
Mutemo wekare wevana vaviri wakaita basa rakati, uye chikamu che "vana vaviri" pakati pekuzvarwa kwakawedzera kubva pa30% muna 2013 kusvika ku50% muna 2017. Uyezve, nekuwedzera kwemari yemhuri uye chizvarwa chitsva chekutsvaga kweBaoma. zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvekuchengeta vana, zvinhu izvi zviri kukurudzira kusimukira kwemusika waamai nevana.
Sekureva kweiResearch consulting data, huwandu hwemhuri huru dzaamai nevana hwakasvika 278 miriyoni muna 2019. Parizvino, chiyero chePan amai nevana muChina chapfuura 210 miriyoni, vazhinji vacho vadiki uye vakadzidza zvakanyanya.
Nhasi, kombi ichatarisa mafambiro matsva emusika wekutengesa kwaamai nevana wematiriyoni pamwe newe pamwe neChirevo cheKutsvagisa nezvekushandisa uye nzira dzekuwana ruzivo dzehuwandu hwaamai nevana muChina.
Mhuri dzaamai nevana muChina
30% yemari yemumba inopedzerwa mukuchengeta vana
Sei musika waamai nemwana uchikwanisa kukura zvakanaka pasi pekudzika kwehuwandu hwekuzvarwa?Tinogonawo kutarisa mashandisirwo ebaopa neBaoma pazvinhu zvaamai nezvemwana muchikamu chinotevera.
Zvinoenderana nedata ra2021, avhareji yekushandiswa kwese kwevanaamai nevacheche mukurera vana uye dzidzo i5262 yuan / mwedzi, inoverengera 20% - 30% yemari yemhuri.
Kuenzanisa matunhu akasiyana, mutsauko wemari yekuchengeta vana iri pachena.Vanaamai nevacheche mumaguta ekutanga vanopedza avhareji ye6593 yuan pamwedzi pavana vavo;Muchikamu chechitatu uye pasi pemaguta, avhareji mutengo wepamwedzi i3706 yuan.
Ko pfuma yaamai mumatunhu akasiyana inotenga nekuteerera chii?
Iyo data inoratidza kuti Baoma mukutanga tier maguta anobhadhara zvakanyanya kune yakakura zvigadzirwa zvevacheche uye yekutanga dzidzo uye varaidzo;Baoma mumaguta echipiri anobhadhara zvakanyanya kusarudzo dzekushandisa dzekurapa nehutano hwehutano, matoyi uye chikafu;Baoma mumaguta akaderera anonyanya kufarira kupfeka zvipfeko zvevana.
Zvigadzirwa zveamai nemwana zvakanatswa
Kugona kwakazara kwezvigadzirwa zvekuchengeta vacheche
Parizvino, kupatsanurwa kwezvigadzirwa zvemadzimai nevana vacheche kwakanyanya kunatswa uye kwakapfuma, uye zvakare yakakamurwa kuita nzira ina: zvigadzirwa zvekunaya kwemvura, zvingangogadzirwa, zvigadzirwa zvinongodiwa uye zvigadzirwa zvemazuva ese.
Ndeupi rudzi rwezvigadzirwa zvinogona kutungamira mumusika wevatengi waamai nevacheche?
Tinofanira kutarisa dialectically.Semuenzaniso, kudiwa kwemusika wematoyi ezvigadzirwa zvinongodiwa zvakakura, asi mwero wekukura unononoka;Sechigadzirwa chinogona kuitika, chiyero chemusika chezvigadzirwa zvekuchengeta vacheche idiki, asi nzvimbo yekusimudzira yakakura.
Kufanana nemanapukeni ayo vacheche vasingakwanisi kurarama vasina, ivo vakave zvigadzirwa zvakaenzana, nekutengesa kwakanaka uye kukura kwakadzikama.
Parizvino, kubva kune zvigadzirwa zvakangotengwa naamai nevacheche, chikafu / zvipfeko / kushandiswa ichiri chikamu chikuru chekushandisa, ine chikamu chekutenga chinodarika 80%.